कत्तिको खतरनाक छ ओमिक्रोन ? यस्ता हुन्छन् लक्षण - ramechhapkhabar.com
विश्वका विभिन्न देशसहित नेपालमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ । आखिर कति खतरा छ यो नयाँ भाइरसको नयाँ रूप, के–के हुन्छन् ? जानौं, यसका लक्षण र उपचारबारे ।
कोरोना भाइरसको नयाँ रूप ओमिक्रोन विश्वका विभिन्न ठाउँमा फैलिरहेको छ । ओमिक्रोन अहिलेसम्म दुनियाँभरिका वैज्ञानिकहरूका लागि समेत चुनौतीको विषय बनेको छ । कोरोनाको यो नयाँ भेरियन्ट पछिल्लो समयको भन्दा यो बढी खतरनाक र अधिक संक्रमणयुक्त देखिएको छ ।
यसकारण ओमिक्रोन भेरियन्टमा ४३ म्युटेसन रहेको छ । जबकि, डेल्टा भेरियन्टमा जम्मा १८ मात्रै रहेको थियो । अहिलेसम्म यो कत्तिको खतरनाक छ भन्ने बुझ्न मुस्किल छ ।
ओमिक्रोनका बिरामीमा देखिने लक्षणहरू
– बिरामीहरूको गलामा समस्या देखिनु । नाक बन्द हुनु, सुक्खा खोकी लाग्नु । केही मानिसहरूमा थकान हुने वा शरीर दुख्नु । थकान हुने, टाउको दुख्ने, हाच्छ्युँ आउनु र राति पसिना आउनु । आदि लक्षणहरू ओमिक्रोनका शुरुवाती लक्षण हुन सक्छन् ।
फलफूल स्वास्थ्यका लागि अत्यावश्यक विषय हो । फलफूले हामीलाई शारिरीक रुपमा स्वस्थ्य राख्न सहयोग पुग्छ । तर धेरै जसो फलफूलको बोक्रा हामी त्यतिकै फाल्छौं । तर फलफूलको बोक्रा हामीले धेरै काममा प्रयोग गर्न सक्छौं । यी बोक्राको प्रयोग गरेर हामीले छालामा सुन्दरता ल्याउन सक्छौं ।